Ny Amboarampeo Virtoaly: Teknolojia, fiaraha-miasa ary mozika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jona 2018 3:50 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, 繁體中文, 简体中文, македонски, বাংলা, Español, polski, English
Ilay mpamoron-kira Eric Whitacre , rehefa nahita ny lahatsary Youtube nampiseho ny tanora mpihira soprano iray mihira ny hira hoe “Sleep” dia nanontany tena hoe: nahoana moa raha miantso olona izy, na aiza na aiza misy azy ireo eto amin'izao tontolo izao, mba handrakitra ireo andiany hafa ny amin'ny amboarampeo a capella (tsy miaraka amin'ny mozika)? Nataony izany ary ho hitanao manaraka eto ny vokatra samihafa tamin'ity andrana goavana tamin'ny fiaraha-miasa antserasera izay niarahany tamin'ny Amboarampeo Virtoaly ity.
Tsy ny dingan'ny famerenana farany tamin'ny tetikasa ihany no nohazavainy tao amin'ny How We Did It fa ny andrana mialoha tamin'ny fanatontosana ny amboarampeo virtoaly ihany koa. Sambany izy no nangataka ireo mpihira mba hividy ny feo mozika manokana ary nihira niaraka tamin'ny a capella (tsy misy fitaovana miaraka aminy). Scott Haines, izay vao indray mandeha no nihaona taminy , dia nanolo-tena ny hanao fanitsiana ilay lahatsary. Indro ny vokatra:
Mampiseho ny torolàlana nalefan'i Eric Whitacre ho an'ny mpandray anjara rehetra ity horonantsary manaraka ity. Tafiditra tao anatin'izany ny torohevitra momba ny fomba hanatanterahana ilay seho, ny fanazavana momba ny fandraketam-peo mavitrika sy ny mozika izay itarihany ny amboarampeo: